APIE ၏အပိုင်းအစ - စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ သတင်းလွှာ - Austin Partners in Education
APIE ၏အချပ်: စက်တင်ဘာလ 2019 သတင်းလွှာ
စကျတငျဘာ 3, 2019
ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Cathy Jones ထံမှ 2019-2020 စာသင်နှစ်မှကြိုဆိုပါသည်။
စာသင်ခန်းထဲမှာ APIE | ယနေ့မှတ်ပုံတင်ပါ!
စေတနာ့ဝန်ထမ်းကိုစိတ်ဝင်စားပါသလား ငါတို့မှတ်ပုံတင်ခြင်းယခုငါတို့ဖွင့်သည် သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြသင်တန်း နှင့် ဆရာ အစီအစဉ်များ!
ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြများသည်အလယ်တန်းကျောင်း (၆) ခုမှခုနစ်တန်းအထိကျောင်းသားများအားကူညီပေးလိမ့်မည်။ - Buret, Dobie, Covington, Martin, Sadler Means YWLA နှင့် Webb ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်များသည် AISD ကျောင်းများရှိ K-12 ကျောင်းသားများနှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောဆက်ဆံရေးကို ဆက်လက်၍ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ Austin ကျောင်းသားများကိုသင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြနည်းပြအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းအားဖြင့်ယနေ့ဖြစ်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအီးမေးလ်ပို့ပါ@ austinpartners.org.
ဘုတ်အဖွဲ့သဘာပတိသစ် Rick Whiteley
ပညာရေးအတွက် Austin အပေါင်းအဖေါ်များ (APIE) ကကြေငြာရန်ကျေနပ်သည် Rick WhiteleyCushman & Wakefield ၏အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သဘာပတိအသစ်အနေနှင့်။ Whiteley ကို Austin ကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကတညီတညွတ်တည်း APIE ဥက္ကChair္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
Whiteley သည် Austin ၏စီးပွားဖြစ်အိမ်ခြံမြေကဏ္35တွင်နှစ်ပေါင်း ၃၅ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိပြီးလူထုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းကိုရရှိခဲ့သည်။ Rick သည် Greater Austin စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်ပိုရေးရှင်း (Opportunity Austin) ၏ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် Austin ၏ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၏စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းအဖြစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ထပ်မံဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ Texas Exes နှင့်အခြား UT နှင့်ပတ်သက်သောအစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်မှုရှိသည့် Longhorn တစ်သက်တာ။
"APIE ဘုတ်အဖွဲ့ကို ဦး ဆောင်ဖို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ကုန်သည်ကြီးများအသင်းသည် Austin လွတ်လပ်သောကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေနှင့်ပူးပေါင်းပြီး AISD ကျောင်းသားများကိုစာသင်ခန်းနှင့်ဘဝတွင်အောင်မြင်မှုရစေရန်နောက်ထပ်အရင်းအမြစ်များကိုထောက်ပံ့ပေးသောအရေးကြီးသောအလုပ်များတွင်ပါ ၀ င်ခွင့်ရခြင်းကိုကျွန်ုပ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်" Whiteley ကဆိုသည်။
နွေရာသီပြန်လည်သိမ်းယူခြင်း APIE နှင့်ပျော်စရာ
2020 Austin မာရသွန် | ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းပါ။
၂၀၂၀ Austin မာရသွန်၊ ဝက်မာရသွန်နှင့် 5K တို့ကိုဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်th, 2020. မှတ်ပုံတင်ခြင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိသည်, ငါတို့အဖွဲ့သည်သင်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ အတွင်းလူပုံပြင်များနှင့်စျေးနှုန်းအသိပေးချက်များကို Austin Partners In Education မှလိုက်နာပါ Facebook, တွစ်တာနှင့် Instagram.
APIE: လူမှုရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု ၁၅ နှစ်
Prevရှေ့APIE ၏တစ် ဦး ကအချပ်: Aprilပြီလ 2019 သတင်းလွှာ